बग्दाबग्दैको पानी जम्‍न थालेपछि ! – live 60media
बग्दाबग्दैको पानी जम्‍न थालेपछि !
लमजुङ — चामेमा मेलिना गुरुङको होटल अगाडि धारा छ । बिहान उठेर हेर्दा धारामा बग्दाबग्दैको पानी जमेको देखिन थालेको एक साता भयो । ‘बिहान ११ नबजी धाराबाट पानी खस्दैन उनले भनिन्साँ झैमा धाराको पानी सानो बनाएर राखिएन भने दिनभरि पनि बरफ पग्लिँदैन ।
हिमपात सुरु नभए पनि पुस लागेयता मनाङमा चिसो निकै बढेको छ । ‘घरभित्रै आगो फुकेर बस्यो, दिन बितायो । यस्तै चल्दै छ उनले भनिन् ।
← त्यो रात – जसले मेरो कोख भरिदियो र उसलाई मैले भगवान माने… सबैले एकपटक पढ्नै पर्ने
भीरमाहुरीको महबाटै जीविकोपार्जन →